Iingcebiso ezintandathu zokuphucula iiBlackheads Skin
ngu admin on 21-12-25
Kukho amashumi amawaka eepores ebusweni.Ubume be-pores bohluka kakhulu phakathi kwabantu abahlukeneyo ngenxa yomahluko kwindlela yokhathalelo lwesikhumba kunye nomzimba womntu ngamnye.Abanye abantu banemingxuma erhabaxa kunye nokuphuma kweoyile ngokugqithisileyo, nto leyo enokubangela ukuvaleka kwemibhobho.Ngamanye amaxesha kuya kubakho iibl ezininzi ...
Indlela yokuthintela imilebe eyomileyo kunye nokukhupha imilebe?
Ulusu lelona lungu likhulu lomzimba womntu, kwaye imilebe, njengolona luhlu luncinci lwe-mucous membrane yomzimba wonke, luchaphazeleka kakhulu kuvuselelo kunye nefuthe lendalo yangaphandle kunye nemetabolism emzimbeni.Zeziphi izizathu zemilebe eyomileyo nexobukayo?I-keratin kwenye ...
Yintoni iYeast kwiiMveliso zeSkincare?
Namhlanje kukho izithako ezininzi kwiimveliso ze-skincare, ezibhengeza umsebenzi wokuchasa ukuguga.Igwele liqhelekileyo libonwa kwiimpawu ezininzi, Kodwa yintoni na kwaye inokunceda njani?Masijonge kwaye sibone namhlanje.Igwele luhlobo lomngundo.Igwele kukhathalelo lwesikhumba ayibhekiseli kwigwele ngokwalo, kodwa igwele ...
Indlela yokuKhawuleza iMetabolism yoBuso kwiShinny Skin?
Ulusu lomntu lufuna imetabolism enokwenza i-corneum endala ixobuke, ngaloo ndlela ikhula ulusu olutsha.Kubomi bemihla ngemihla, izinto ezinje ngokuhlala kude kube sebusuku, ukusebenza kakhulu, uxinzelelo lwengqondo olugqithisileyo, isifo njlnjl. kuya kubangela ukuba i-metabolism yolusu icothe, ekhokelela kwiingxaki ezahlukeneyo zolusu.Nje, ...
Indlela yokunciphisa Imigca yeEye okanye imibimbi?
Okokuqala kufuneka sazi izizathu zemigca emihle.1.Ubumanzi obungonelanga Phakathi kwesikhumba ebusweni, ulusu olujikeleze amehlo lolona luncinci, luyi-0.4 mm kuphela ubukhulu.Le ndawo ulusu ayinamadlala sebaceous kunye namadlala ukubila, kwaye ibhityile kakhulu, malunga 1/3~l/5 ukutyeba ulusu kwezinye pa...
Uyisebenzisa njani iMassager yokuphakamisa ubuso?
Amanyathelo okusetyenziswa: 1. Inyathelo lokuqala: Ukucoca Hlamba ubuso bakho phambi kokusebenzisa i-roller yobuso ukuze ugweme ukuxubha uthuli okanye indle kwi-pores yakho ngexesha lokuphululwa.2. Inyathelo lesi-2: I-massage Iirola zobuso zincanyathiselwe kumacala omabini ezidlele kwaye zityibilika ukusuka ezantsi ukuya phezulu ukusuka kwicala lesilevu ...
4 Imikhwa emibi emincinci yokubangela iingxowa zamehlo
Iingxowa zamehlo zivela ikakhulu kubantu abaneminyaka ephakathi kunye nabantu abadala, ngenxa yobudala, ulusu luya kukhululeka, kwaye emva koko kubonakala iingxowa phantsi kwamehlo.Ukubonakala kweengxowa zamehlo kuyinto ye-physiological phenomenon;ndicela ungothuki.Emva kokuba izikhwama zamehlo zibonakala, ziyakwazi ukubonakala ngqo ebusweni, ngoko ...
Yintoni enokuyenza ibhrashi yokuphulula?
Iimpawu: 1. Isetyenziselwa kakhulu ukuthambisa ulusu lwamalungu, kwaye inokukhawulezisa imetabolism, kwaye ivelise ulusu oluthambileyo kunye nethenda.2. Iingcebiso zebhrashi zinokususa enye inwebu yangaphandle yesikhumba esifileyo kwaye ikhuthaze ukuhamba kwegazi.3. Inokufikelela kwiziphumo zokubumba kunye nokuhombisa i-b...
Abantu abahlala bekhuhla i-Gua Sha, yintoni i-"Sha" ephuma emizimbeni yabo?
Abantu abakhe bazama iGua Sha badla ngokuba nomqolo obomvu emqolo.Lo mbala obomvu yinto esihlala siyibiza ngokuthi "Gua Sha".Oku kunjalo ngokwenene.Ngoncedo lweGua Sha, abantu banokudlulisela amandla kwizicubu zendawo.Ulusu lomqolo lusulwa ngokuqhubekayo.Le nkqubo isebenza ikakhulu kwi...
Indlela yakho entsha yokuCoca uBuso
Ukunakekelwa kakuhle kwesikhumba konke kuqala ngokucocwa kakuhle.Akunjalo nje ngokuba linyathelo lokuqala / elisisiseko kukhathalelo lwakho lwesikhumba, kodwa yeyona ndlela yokuvumela ulusu lwakho lukhuphe ukungcola, ioyile kunye nokungcola, oku kunokubangela iinkxalabo ezininzi.Ke ngoko, ulusu olucocekileyo luyisiqalo solusu oluhle kuwe.M...
Indima kunye nomahluko wokukhuhla kunye nekomityi
ngu admin on 21-09-30
Ezi ndlela zimbini zemveli zinemida yazo yokusetyenziswa.Ukuyibeka ngokulula: ii-pathogens ziphezu komhlaba, i-Gua Sha ilungile;iipathogens zingaphakathi, ikomityi ilungile.Ukuba awulunganga ekugwebeni ngaphakathi nangaphandle, unokukhuhla i-Gua Sha kuqala, emva koko ucofe.Gua...
I-Shenzhen Margotan Exhibition kwi-CCBEC 2021
China(Shenzhen) Cross-Border E-Commerce Fair Kutshanje ubhubhani weHlabathi liphela wenza ubomi bomntu wonke bube nzima kakhulu kwaye bungenzeki;Ukuthenga nge-Intanethi kuye kwaba yindlela yokuphila edumileyo neyimfuneko.Kuloo maqonga e-E-Commerce, yonke imihla inokufikelela ngokulula kwiimveliso ezahlukeneyo, ukusuka kwizixhobo ezinkulu zasekhaya...